အာဏာရှင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ရာဇ၀တ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမည်ဟု ကွင်တာနာ ပြောကြား | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘာသာပြန်, ပြည်တွင်း သတင်း
မတ်လ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၃
Handout of Quintana, U.N. special envoy on human rights in Myanmar, meets with Myanmar pro-democracy leader Suu Kyi in Yangon
ကုလ ကိုယ်စားလှယ် ကွင်တာနာနှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မြန်မာအရပ်သားအစိုးရရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အတိုက်အခံပါတီတို့ နှစ်ဘက်စလုံးက စစ်အစိုးရကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကို ထုတ်ဖော်တင်ပြဖို့ လက်ရှိတွင်ခွန်အားမရှိကြောင်း ကုလစုံစမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်က သောကြာနေ့တွင် ပြောခဲ့တယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းတစ်ရပ် က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီး တာရှည်တည်မြဲဖို့နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ (ဒဏ်ရာအနာတရတွေကို) ကုစားဖို့အတွက်တော့ ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ ကျူးလွန်ဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ အမှုတွဲကြီးအတွက် တာဝန်ခံမှုရှိရမယ် လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တိုမတ်စ် အိုဂျီယာ ကွင်တာနာက ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ အဓမ္မစေခိုင်းမှုတွေ၊ လူနည်းစု လူမျိုးခြားအုပ်စုတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖိနှိပ်မှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ ညှဉ်းပမ်းနှိပ် စက် မှုစတာတွေ ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရပါတယ်။
အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိစ္စကိုသာမက အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကွင်တာနာကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ – “မြန်မာပြည်မှာ အမှန် တကယ် ဖြစ်နေတာကတော့ဗျာ၊ ဒီကိစ္စကို ဘယ်သူတွေကမှ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်ဆွဲတာမျိုးမရှိဘူး။ အစိုးရကလည်း အစီအစဉ်မရှိ ဘူး၊ တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာလည်း အစီအစဉ်မရှိသလို၊ လူနည်းစု လူမျိုးခြားအုပ်စုတွေမှာလည်း အစီအစဉ်မရှိဘူး” လို့ ကွင်တာနာက ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ကွင်တာနာက မြန်မာအစိုးရရဲ့ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သလို ဒေါ်စုကြည်နဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့လက သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးစဉ် အတွင်း မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါ တယ်လို့ ဂျီနီဗာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်စုကြည်ရဲ့ အတွေ့အကြုံမဲ့ ပါတီကတော့ သောကြာနေ့ကစပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ဂရက်ကို ကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အကြို ပြင်ဆင်မှုအချို့ အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရခိုင်အရေးကိစ္စကြောင့် အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းတွေ ဖြစ်နေသလို၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာလည်း ဒီကိစ္စစိုးရိမ်ဖွယ်အဖြစ် ရှိနေ တယ် လို့ ကွင်တာနာရဲ့ ကြာသပတေးနေ့က နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာမှာ တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေသာမက အစီအစဉ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုစတဲ့ အမှုတွဲတွေ ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ (ဖိအားပေးမှုတွေ) ရှိနေတယ်လို့ ကွင်တာနာက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင်သူက ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေကို ရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ရာမှာ – မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒီလို စစ်အစိုးရကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေ အကြောင်း အခုအချိန်မှာ စတင် ဆွေးနွေးဖို့တောင်မှ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီလမ်းကြောင်းမှာ ဘာသာရေးအဖွဲ့တွေက ခုခံနေတဲ့ အကြောင်း၊ သူတို့က ခွင့်လွှတ်ရေးတွေ၊ အနာဂတ်ကိုသာကြည့်ပြီး အတိတ်ကို လျစ်လျူပြုလိုမှုတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ ကိုပါ ပြောပြခဲ့ ပါတယ်။
ကွင်တာနာကတော့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကမှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ လွတ်လပ်လာခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားဇာတိဖြစ်ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ကတော့ဗျာ၊ အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ကုစားဖို့ လိုတယ်လို့ပဲ အမှန်အကန်ယုံကြည်ထားတယ်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအောင်မြင် ဖို့အတွက် အတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တာတွေကို သင်္ခန်းစာယူဖို့ကလည်း တကယ်ကို အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကျွန်တော်တို့က ထပ်ကာထပ် ကာ ဖြန့်ချိနေရမယ်။ အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို သင်္ခန်းစာယူဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ရမယ်။ နှစ် ၄၀ ကျော်လောက် စစ်အစိုးရက အုပ်စိုးသွားတဲ့နေရာမှာ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ သရုပ်ဆောင်နေဖို့ မလိုဘူး။” ဟု ကွင်တာနာက ရှင်းပြခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရက ကွင်တာနာ၏ မြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များ ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ လော်ဘီ(lobby) လုပ်နေကြောင်း၊ သူ၏ မြန်မာပြည်အရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ၂၀၁၄ မေလအထိ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ့အနေ နဲ့ ကတော့ ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ခံစားရကြောင်း ကွင်တာနာက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
၄င်းပြင်သူက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်းစားမှုတွေရှိနေကြောင်း၊ သူတို့အနေနဲ့ အပြု သဘောဆောင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သာ မြန်မာပြည်တွင်း စီးပွားရေး လာရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
(ရိုက်တာသတင်းဌာနမှာ စတီဖင် နဘဟေး၏ သတင်းတင်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။)
အထက်ပါသတင်းတွင် ပါရှိသည့် ကွင်တာနာ၏ တင်ပြချက်ဖြစ်သော –
“မြန်မာအစိုးရက ကွင်တာနာ၏ မြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ များ ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့ လော်ဘီ(lobby) လုပ်နေကြောင်း၊” ဆိုသည့် အချက်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကွင်တာနာက စစ်အစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို စစ်ဆေး အရေးယူဖို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုလည်း သုံးသပ်ရပါသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်း လတ်တလောပေါ်ပေါက်နေသည့် မွတ်စလင်မ်ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချရေးနှင့် ဘာသာရေးစော်ကားမှုများမှာ “ကွင်တာနာ ဖွတ်ဖွတ်” ဟူသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာအမည်ခံလူအုပ်စု၏ ကြွေးကြော်သံမှ အစပြုခဲ့သလို ထို သံဃာများကိုယ်တိုင်ဦးစီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေကြောင်း သိရပြန် ပါသည်။
ကုလတွင် ကွင်တာနာအလိုမရှိအဆို တင်သွင်းရေးမှာ မြန်မာအသွင်ပြောင်းအစိုးရအတွက် အရေးကြီးနေသည့် ကိစ္စဖြစ်နေ၍ “ကွင်တာနာ ဖွတ်ဖွတ်” ဆောင်ပုဒ်နှင့် အသွင်ကူးပြောင်းထားသည့် အာဏာရအစိုးရအဖွဲ့တို့ ဆက်စပ်လျက်ရှိ၊ မရှိဆိုသည်မှာ သံသယပွားဖွယ်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
This entry was posted on March 10, 2013, in နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Participant historians on international seminar about Arakan history at Mahidol University of Bangkok are unable to provide static calculation of infiltrators and also quiet regarding to establishment of Mrauk Oo dynasty by Mulims.